Dib u eegida SmartMike + oo uu sameeyay Sabinetek, makarafoonka ugu yar ee wireless | War gadget
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Gargaarka, Sawir iyo dhawaq, Reviews
Maanta waan la nimid dib u eegis aad u xiiso badan, dhankasta kuwa hiwaayadooda, ama xirfad ahaan u abuura waxyaabaha ku saabsan maqalka. Caawinta SabineTek waxaan awoodnay inaan tijaabino SmartMike + makrifoonka Bluetooth.
Qalab ku siin doona tayada dheeraadka ah ee fiidiyowyadaada iyada oo ay ugu wacan tahay tayada duubista codka waxay bixisaa. Makarafoon yar in waxay fududeyn doontaa qalabkaaga wax lagu duubo ugu yaraan. Waana sidoo kale ka dhigaysa inay ku sii fiicnaato heerka heerka xirfadeed.
1 SabineTek SmartMike +, makarafoonka aad raadineyso
2 SmartMike + sanduuqa kujira
3 Naqshadeynta iyo muuqaalka muuqaalka SmartMike +
4 Dhamaan tignoolajiyada ay SmartMike + na siiso
5 Shaxda Qeexitaanka SmartMike +
6 Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Sabinetek's SmartMike
SabineTek SmartMike +, makarafoonka aad raadineyso
Haddii aad tahay taageere muusig oo aad jeceshahay inaad duubto naftaada. Hadaad kaqeyb gasho Podcast. Ama haddii heer xirfadeed aad u baahan tahay inaad iska duubto adiga oo maqal ama muuqaal ah. SabineTek SmartMike + waa qalabka ugu dambeeya. Makarafoon wireless ah silig la'aan iyo tayada maqalka qof kastaa wuxuu rabaa vloggaaga ama iskuxirkaaga. Halkan waxaad ku haysataa Amazon SmartMike + oo ay la socoto xamuul bilaash ah
Ha iloobin daaqadahaas waaweyn iyo xadhig aan fiicnayn oo ku dhex jira dharka. Iyada oo haysa fudud ee sheyga loo yareeyay cabirka ugu badan ee aad yeelan doonto ilaa 6 jeer ka sareeya kan makarafoonka caadiga ah. Xuduudaha kala duwan bluetooth 5.0 xasiloonida la damaanad qaaday iyo naqshadeynta hadda kuwaas oo aan kuu sheegi doono wax kasta oo hoose.
Qalabka lama huraanka u ah vlogger kasta ayaa yimid. Hadaad rabto inaad yeelato codka xirfadlaha ah ee ugufiican fiidiyowyadaada ama ku duubo Podcast-kaaga tayada ugu fiican, jooji fiirinta. SmartMike + waa makarafoonka ku habboon. dheeraad ah waad qaadan kartaa oo duubi kartaa meel kasta. Awoodaada inaad yareynta codka sameeyaa duubista banaanka dhib maahan.
SmartMike + sanduuqa kujira
Kani maahan uun ficil-furka, waxaan helnay dhowr jeer oo aan ku tijaabinno qalab sida makarafoonka wireless-ka ah. Waa waqtigii gudaha la eegi lahaa SabineTek sanduuqa makarafoonka ugu khaaska ah inaan kuu sheego wax kasta oo ay na siiso.
Ka sokow makarafoonka, oo aan si faahfaahsan hoos ugu sharaxayno, waxaan aragnaa dhowr cunsur. Si ka duwan waxa ku dhaca dhagaha, waxaa jira waxyaabo badan Qalabka ku habboon si loo sameeyo SmartMike + xitaa ka sii dhammaystiran.
Waxaan leenahay ku amraya fiilada, oo leh qaab Micro USB-ga USB. Waxaan sidoo kale helnay madaxa dhegaha mono, dheg keliya in aan ku xirmi karno aqbalida 3.5 mm leh SmartMike +. Y maro yar oo qaad ah iyo in makarafoonka sifiican loo ilaaliyo.
Ugu dambeyntii, marka lagu daro mid yar isticmaalka iyo hagaha qaabeynta, oo kaliya ku yimaada Ingiriisiga iyo Shiinaha oo dhammaystiran, waxaan haynaa waxyaabo kale oo dheeri ah. Ku saabsan yahay laba 'dabool' aagga makarafoonka, mid ka mid ah xumbo iyo mid kale timo macmal ah dheer. Labaduba way adeegaan si looga fogaado buuq ka yimaada wada hadalka ama sawaxanka dibedda sida dabaysha oo kale, oo si wanaagsan loo xiirayo.
Naqshadeynta iyo muuqaalka muuqaalka SmartMike +
Marka lagu daro bixinta dhammaan astaamaha aan ka raadin karno qalab noocan ah, SmartMike + sidoo kale wuxuu leeyahay naqshad qurux badan oo soo jiidasho leh. Hayso a jirka macdan ah oo laba midab leh isku dhafan Waxaan ka heli laba nooc, madow ama cadaan, qaybta ugu dheer, oo midab bir ah ku leh aagga uu micro-ku jidh ahaan ugu yaal.
Qeybteeda hoose, taas oo ah mida hoos udhacaysa hadaan u isticmaalno iyada oo lagu dhejinayo isku haynta, waan helnaa dekedda rarka. Xaaladdan oo kale waa kaalin Micro USB kaas oo fiilooyinkiisu ay ku jiraan sanduuqa si loogu buuxiyo.
In qaybta hore, taas oo muuqata marka aan isticmaalno, waxaan leenahay iftiin yar oo LED ah taas oo beddeli doonta midabka iyada oo ku xidhan haddi aad wax duubeysid ama aad hakisay. Dhanka kor u kaca ayaan ka helaynaa, hal dhinac dhamaadka makarafoonka laftiisa. Micro oo aan ku ilaalin karno suuf yar oo aan ka dhex helno sanduuqa gudihiisa. Dhinacaaga, waxaan ku leenahay, si hufan ugu yaal, Badhanka awoodda. Iyada oo qaab dheeri ah midab casaan ah oo ku siinaya qoraal midab ah.
In kor waxaan leenahay a 3,5mm aqbasho jack jack halkaasoo aad kaga xirmi karto headset analog ah. Wax u adeegi doona in la helo cod maqal ah isla waqtiga aan wada hadalno. Marka waxaan si fiican u ilaalin karnaa wadahadalka xiriirka tooska ah, ama duubista aan ku dhexgalno taleefanka, tusaale ahaan. Hadday tahay qalabkii aad raadineysay hadda iibso adigoo gujinaya halkan SmartMike +
Dhamaan tignoolajiyada ay SmartMike + na siiso
Sidii aan kuu sheegaynay, kaliya nama wajihi doonno mid ka mid ah makarafoonnada bilicsanaanta ugu soo jiidashada badan suuqa. Marka lagu daro qaab super compact iyo naqshad aad u fiican, SmartMike + wuxuu yimid isagoo ku qalabaysan tikniyoolajiyadda ugu fiican xilligan si aad u siiso codka ugu tayada sareeya duubistaada ama baahintaada.
Mid ka mid ah faahfaahinta muhiimka ah ee qalabka wax lagu duubo oo yar ayaa ah is-maamul ay na siin karto. SmartMike + ayaa leh batari 110 mAh ah, taasoo ahmiyadeed aad u yartahay. Laakiin mahadsanid waxtarka tamarta aad u wanaagsan waa awood u leh inay na siiso illaa 5 saacadood oo hawlgal aan kala go 'lahayn.
Waxay ku leedahay gudaha leh qalab si khaas ah loo soo saaray kaasoo horumarintiisu ay ku guuleysatay ugu sarreynta ugu wanaagsan ee dhammaan ilaha intii ay shaqeyneysay Qualcomm CSR8670. Kuu ogolaanayaa a duubitaanka ugu fiican ee leh dhawaaq tayo leh mahadsanid yareynta buuqa. Mahadsanidiin Tiknoolajiyadda TWS, SmartMike + waxaa lala xiriirin karaa mid kale oo siman waana la isticmaali karaa isla marka ay jiraan dhowr wada-hadal.
Waxaan u adeegsan karnaa makarafoonka Sabinetek inaan isku duubno inta aan wadahadalno telefoonka. Waxaan sidoo kale heli karnaa maqal mahadsanid headset-ka aan ka helno sanduuqa gudihiisa. Dheeraad ah, wuxuu u gudbiyaa maqal fara badan oo aad u hooseeya oo dheellitiran kana kooban 49.2 ft. Waxay aqoonsan kartaa codka waxayna siisaa suurtagalnimada jiil otomaatig ah oo faylal cinwaan Cinwaan ah oo la saxi karo ah.
Shaxda Qeexitaanka SmartMike +
Tusaale SmartMike +
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.0
Kanaal bilaa xadhig ah 2
Heerka saamiga 44.1 khz
Borotokool A2DP - HFP - SWISS
Batariga 110 Mah
Madax-bannaanida Ilaa 5 saacadood
Cabbirada X x 5.8 1 1.5 cm
Qiimaha 132.99 €
Xiriirinta wax iibsiga SmartMike +
Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Sabinetek's SmartMike
Cabbirka loo dhimay si lamid ah Pen Drive
U hoggaansanaanta oo leh dhammaan qaabab la heli karo
Tayada xirfadeed duubista codka ee maqalka iyo muuqaalka ah
Madaxbanaanida ilaa 5 saacadood oo la isticmaalo sii waday.
Batariga oo aad u yar tiro ahaan, in kasta oo ismaamulku si fiican isu difaaco.
Isku haynta ayaa wax yar cidhiidhi ah jaakad ama dhar qaro weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Dib u eegista SmartMike + ee uu qoray Sabinetek
Sida loo tijaabiyo Google Stadia Pro bilaash 2 bilood